Mecha Tank Arena bụ egwuregwu ọhụụ ọhụrụ na drones na ndị ọzọ | Gam akporosis
Ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ na ị kwalite tank gị na Mecha Tank Arena
Mecha Tank Arena bụ egwuregwu gam akporo ọhụrụ nke anyị ga-enwe ike imeziwanye tank anyị ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ nke a na-aga na anyị ga-aga n'ọgbọ agha iji kpochapụ onye isi ikpeazụ dị ka ebumnuche bụ isi.
Egwuregwu nke nwere ihe dị mkpa na mbụ, nwere ike ijide gị na nkeji nkeji malite na-agbakwunye drones, meziwanye ngwa ọgụ ha ma ọ bụ ọsọ ha ma nwetakwa tankị ọhụrụ ndị ọzọ iji jiri ya na-ebupụta ngwa ọgụ dị iche iche.
1 Nke nta nke nta ọ na-eme ka ị ghara ịmara
2 Kwalite tank gị na Mecha Tank Arena
3 Egwuregwu ọgụ dị ịtụnanya
Nke nta nke nta ọ na-eme ka ị ghara ịmara
Ọ bụ eziokwu na Mecha Tank Arena nwere ike ọ gaghị enye ọtụtụ ụdị ọgụ ọgụ, mana ọ nwere ihe ọ bụla ọzọ iji mee ka ịchọrọ ịhụ otu. mgbasa ozi iji mụbaa site na mkpụrụ ego 5 nwetara. Egwuregwu nke pụtara maka ikike iji melite tankị na dịka n'ọgụ ọgụ anyị ga-ahụ esemokwu zuru ezu iji gaa maka onye isi ikpeazụ.
Nke a bụ ebumnobi nke ọkwa ọ bụla na nke anyị ga-elekwasị anya, ebe ọ bụ na nke a, a ga-amanye anyị ịbụ gbara ọtụtụ tankị ndị iro gbara gburugburu. Ndị iro na enwere ọtụtụ iche na eziokwu juru anyị anya na anyị agbaala ọkwa mbụ.
Anyị ji osisi na-akwọ ụgbọ anyị na nke ọzọ anyị na-eduzi egbe akpaka na mgbe niile na-egbochi nchebe nke tankị ndị iro. Anyị ga-adị ngwa ịchụso nke ọma iji kpochapụ tankị niile gbara anyị gburugburu ka anyị wee lekwasị anya gbaa ndị na-esote onye isi.
Kwalite tank gị na Mecha Tank Arena
Ya mere, anyị ga-emecha larịị mgbe anyị gwụchara na na ikpeazụ onyeisi nwere a ukwuu ọnụ ọgụgụ nke ndụ ihe na dị ka ka anyị gaa n’ihu, a ga-etinye drones nke ahụ ga-agaziri anyị. Ná ngwụsị nke ọkwa ahụ anyị na-enweta ego ego metụtara ọnụ ọgụgụ nke tankị ndị ekpochapụ.
Anyị nwere ike ịhụ mgbasa ozi iji mụbaa ọnụ ọgụgụ ahụ na ise, yabụ na ị maralarịrị ihe ị ga-eme. Na ego ahụ anyị nwere ike melite nka dịka ọsọ, kụrụ isi ma ọ bụ HP na ogbugba mmebi. Mana obughi nani ihe nile ka diri imezi ihe nke oma, ayi nwekwara drones. Site na otu taabụ anyị nwere ike ịnweta oghere niile anyị nwere ike ịmeghe iji kenye otu ụgbọ mmiri ma ọ bụ ọzọ; na ee, enwere drones nke ụdị niile na dịka anyị nwere ike ịkwalite ya.
Dịka ị pụrụ ịhụ, Mecha Tank Arena awade a otutu na ndozi ọ bụkwa otu n'ime akụkụ ndị kachasị masị anyị, ebe anyị ga-ahụ mgbanwe ndị anyị mejuputara n'ime ya nke ọma n'ọgụ. O nwekwara tankị ọhụrụ nwere igwe dị iche iche na ike dị ukwuu; ee, enwere obere ịkwụ ụgwọ iji merie, ebe ọ bụ naanị euro nwere ike zụrụ ụfọdụ tankị ...
Egwuregwu ọgụ dị ịtụnanya
Mecha tank Arena were ju anyi anya. Echeghị m na ọ ga-adị ka nke ahụ site na oge mbụ, ebe ọ bụ na ọtụtụ oge ị "rie" nke ọ bụla truño ... Luckily ebe a anyị nwere mmụba ndị ahụ niile ga - eme ka anyị nwee ọganiihu nke ọma iji wee na - aga n'ihu ma mata tankị ọhụrụ. Egwuregwu freemium nke na-eri ahụ n'ụzọ nkịtị; karịsịa ma ọ bụrụ na ị na-amasị mecha.
Were anya gwuo egwu Na nke ahụ nwere ike ichetara gị egwuregwu dị ka Crossy Roads ma ọ bụ Minecraft n'onwe ya. Nke ahụ bụ, na-arụ ọrụ nke ọma ma na-enwe nnukwu arụmọrụ ọbụlagodi mgbe enwere ọtụtụ tankị na ihuenyo ya na ihe ngosi niile nke mgbawa na ndị na-agbawa agbawa.
N'ihi ya anyị na-ahụ a Mecha Tank Arena dị egwu nakwa na anyị kwadoro ka ị nwaa ugbu a. Nakwa zipu mgbasa ozi ole na ole ka ị wee nwee ike ịkwalite tank gị ngwa ngwa ma ọ bụ jiri nke abụọ nweta ohere ọhụụ. O juwo anyi anya ma o diri na nkeji nkeji mgbe o jisiri ike setịpụrụ anyị ebumnuche ịzụta tank ma ọ bụ tinyekwuo drones.
Na-etinye aka na-enwe ike ịmezi tank anyị na-aga n'ihu ma si otú a na-eche ọtụtụ ndị iro ihu na onye isi nchịkwa dị ka ebumnuche.
Usoro edemede: 6,7
Igwe dị iche iche nke nkwalite maka tank mmiri na ndị ọzọ
Ndị iro dị iche iche site na ọkwa mbụ
Nnukwu arụmọrụ mgbe enwere ọtụtụ ndị iro na ihuenyo
Ọ nwere ụgwọ ụfọdụ iji merie na tankị ndị ahụ sitere na euro
Developer: Egwuregwu Nightplay
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Egwuregwu gam akporo » Ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ na ị kwalite tank gị na Mecha Tank Arena
Igwefoto n'ihu nke Honor V30 Pro adịghị mma [Review DxOMark]
PUBG Mobile weputara Mad Miramar map, oge ohuru, ugbo ohuru na otutu ndi ozo